Kunetsana kweMasangano eVashandi veHurumende Kovhiringa Nhaurirano dzeMihoro?
Chishanu, Kukadzi 12, 2016 Local time: 15:50
WASHINGTON— Matambudziko evashandi vehurumende anenge acharamba achinetsa zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekuramba kutambira chikwata chakanga chasarudzwa nevamwe muApex Council kuti chimirire vashandi munhaurirano dzemihoro.
Svondo rapera Apex Council yakashevedzera musangano wekugadzirisa kusawirirana kuri mumasangano evashandi vehurumende, asi sangano rePublic Service Association, PSA, rakaramba kupinda mumusangano uyu.
Izvi zvakazopa kuti Apex Council ibude nemazita evanhu vapfumbamwe vachibva mumasangano ose evashandi vehurumende, kusanganisira rePSA, ayakazotumira kuhurumende.
Asi PSA inonzi yakabva yanyorawo tsamba kugurukota rezvevashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, ichivazivisa kuti yakanga isineyi nechekuita nechikwata cheApex Council ichi, izvo zvinonzi zvakazopa kuti Amai Matibenga varambe kutambira mazita aya.
Hatina kukwanisa kubata Amai Matibenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Asi sachigaro weApex Council, VaDavid Dzatsunga, vanoti vakazvipira kutsvaga nzira dzinogona kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi aya, kuitira kuti vakwanise kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mutungamiri wePSA, Amai Cecilia Alexander, vanoti vanotambira danho rakatorwa nehurumende panyaya iyi sezvo vakanga vasina kugarwa navo pasi. Vanotiwo vakazvipira kugadzirisa dambudziko ratadzisa kuti nhaurirano idzi dzimutsiridzwe.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaRaymond Majongwe, vanoti vanofunga kuti ivo pamwe nesangano ravo ndivo vasiri kudiwa munhaurirano idzi.
VaMajongwe vanoti nechido chekuti vashandi vehurumende vasarambe vachitambura, sangano ravo rakazvipira kubuda muchikwata chiri munhaurirano dzemihoro ichi kana izvi zvichiyamura vashandi muhondo yavo yemihoro
Hurukuro naVaDavid Dzatsunga
Hurukuro navaDavid Dzatsungai
Hurukuro naMai Cecilia Alexanderi
Hurukuro naVaRaymond Majongwei
VOA60 Africa - Nigeria: Two Boko Haram female suicide bombers kill more than 60
Nigeria: Two Boko Haram female suicide bombers kill more than 60
Mutongo weDare rekuSouth Africa Wekuti Vanosungwa Vasina Mapepa Vaende Kumatare neKukurumidza Wofadza Zvizvarwa zveZimbabwe.
Dare repamusoro reGauteng North muSouth Africa rakatonga kuti vanhu vose vanosungwa nenyaya dzine chekuita nekupinda pamwe nekugara munyika iyi vanofanirwa kumiswa pamberi pematare mukati memazuva maviri, kukundikana kwazvo vanofanirwa kuburitswa muhusungwa.
Hurukuro naVaObert Gutu naVaNick Mangwana
Most ViewedMabhanga Maviri muZimbabwe Anobviswa paZvirango Zvakatemerwa neAmericaVaMnangagwa naVaCharamba Vofumurwa KuMusangano weZanu-PF Politburo Hurumende Inotara Nzara seDambudziko Rakakurisisa MunyikaMhuri yaVaItai Dzamara Yoronga Kusangana naVaMnangagwaNyakuda kuBhomba Kambani yaVaMugabe Okandwa Mujeri kweMakore Mapfumbamwe